Ho an'ny fiverenana amin'ny fahendrena politika
Fitondrana iray no voaongana, iray hafa no nisolo azy. I Madagasikara indrisy dia zatra io toe-javatra io hatramin’ny fiafaran’ny Repoblika Voalohany tamin’ny 1972. Eo am-piandrasana ny fitsaran’ny tantara, izay hialan’ny adihevitra mahery vaika mitàna ny sain’ny maro ankehitriny, ny zava-misy dia mampisaina amin’ny fandehan’izy ireny sy ny vokany.
Ny fiovan’ny fitondrana dia tsy resaka fotsiny raharahan’ny ara-dalàna. Ny ara-dalàna na ny ara-drariny dia mety ho zava...
Antso ho an'ny ankolafin-kery eto amin'ny firenena
Mila vonjy i Madagasikara !
Eo am-pelatananareo mpanao politika ny ain’ity Firenena ity, dia ianareo ankolafin-kery na «mouvances» efatra, notsongaina tao anatin’ny maro izay mba mahefa ihan...
Fanambarana nataon'ny CONECS, KMF/CNOE sy SeFaFi momba ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara
Efa am-bolana izao no nametrahanay, izahay Fiaraha-monim-pirenena, eo ambony latabatra ny fanontaniana mahakasika ny fanovàna ny Politikan’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Soritana fa nampavitrika ny sehatra ny fanalalahana natao teo ambany fitarihan’ny mpamatsy vola satria nahasarika vola 4 miliara dolara mahery natao petrakarena mamokatra. Saingy, zara raha nisy fiantraikany teo amin’ny toekarentsika izay fomba fiasa izay. Nomena tombontsoa manokana ara-ket...
Tsy mamaha ny olana ny hery fanairana
Efa ho roa volana izao no indro ampahan’ny vahoaka malagasy no maneho am-pilaminana ny tsy fankasitrahany ny mpitondrany. Teto Antananarivo renivohitra ihany aloha izany, niitatra manerana ny Nosy ny fikomiana izao. Ny fiitaran’ny hetsika dia maneho fa iraisana manerana ny Nosy ny olana : tokony ho vahana eo anivon’ny firenena manontolo izy izany.
Ny iray amin’ny antony mampikatso ny raharaha dia dia ny fandavan’ny fitondrana hanome ho an’ny vahoaka ny vaovao, izay zon...
Ny fanaovana politika sy ny fomba hahatongavana eo amin'ny toeram-pahefana nanomboka tamin'ny 1972
Jery todika atolotry ny SeFaFi
Efa ho dimam-polo taona nahaleotena kanefa mbola tsy hitan’i Madagasikara hatrany ny firafitra voafaritry ny lalàna sy ny fomba fanaovana politika niantoka ny fahamarinan-toeran’ny fahefana. Ny krizy midadasika nanomboka ny janoary 2009 dia mampitodika ny saina amin’ny taona 1972, 1975, 1991 ary 2002. Ireo fikomiana sy fifandonana nifandimby izay niantoka ny fifandimbiasan-toerana dia mametra-panontaniana amintsika indray : lahatra...
Ho fiarovana ny hasina repoblikana sy ny fanamafisana orina ny demokrasia eto Madagasikara
Ny tsy fisian’ny fiombon-kevitra mikasika ny fototra iorenan’ny Repoblika sy ny tsy fironana amin’ny fomba fijery iraisana no fototra miteraka ny korontana ara-politika, ara-toekarena sy ara-piarahamonina miverimberina eto Madagasikara. Mitsingerina foana ny ady fahefana eto amin’ny Firenena. Noho izany, tsy marim-pototra ny faminavinana ny hoavin’ny toekarena, mandroso-mihemotra ny harin-karena, mikorotana be ihany ny fiaraha-monina ka mahatonga ny fivoarana sy ny fandr...
Fifidianana sy zon'ny olombelona : fanamby ho an'ny demokrasia
Ny famakiana ny fanambarana navoakan’ny SeFaFi (Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena) voarakitra ato amin’ity tahirin-kevitra ity dia ahafahana milaza fa mandiso fanantenana ihany ny zava-bita tamin’ny taona 2007 ho an’ny tantaram-pirenena. Tokony ho niafara tamin’ny fitoniana teo amin’ny fiainana politika sy ny fahavitrihana bebe kokoa amin’ny ezaka fampandrosoana ny fahalani...
Sefo fokontany hoe, fa ho aiza isika ?
Nankalazaina vao haingana tamin’ny haino aman-jery ny Sefo Fokontany (SFKT) tamin’ny fotoana nanomezana fiofanana azy ireo tao amin’ny Lapam-panjakana ao Iavoloha. Efa niresaka momba izany ny SeFaFi tamin’ny fanambarana navoakany ny 28 febroary 2007 tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka mikasika ny Lalàmpanorenana. Noho ny fifidianana ben’ny tanàna nambara hatao ny 12 desambra 2007, dia velona ery ny fanontaniana manao hoe : inona no tian’ny fitondrana ankehitriny hatao amin...
Antso ho amin'ny fandraisana anjara : mba hisian'ny famaritana mazava kokoa ny andraikitra
Eo amin’ny firaisa-monin’ny mpanao politika, dia andraikitry
ny mpitantana ny fahefam-panjakana ny mamaritra ny lalan-kizorana,
ny maka ny fanapahan-kevitra tokony horaisina ary ny miantsoroka
ny andraikitra amin’izany, izay atomboka amin’ny fanaovana
Ny mpanohitra kosa anefa dia tsy voantso handray anjara amin’ny
fampiasana ny fahefana. Andraikiny ny manara-maso, ny mitsikera
ary ny manome tolo-kevitra isafidianana araka ny vinavinana
teti-pitondrana azy mano...
Fifidianana sy fiainana andavanandro
Nifantoka tamin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ny sain’ny rehetra tamin’ny taona 2006. Tsy mahagaga raha toa ka nandray an-tanana ny ahiahy sy ny zavatra andrasan’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi, ary tamin’ny fanambarana fito navoakany, dia voatokana ho an’io fifidianana manan-daja io ny dimy amin’izy ireny.
Nampitombo ny ahiahy ny fahatsiarovana ny tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 20...
Fandalinan-kevitra aorian'ny fifidianana
Ny andron’ny 23 desambra, dia tao anatin’ny hamehana no nambaran’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàm-panorenana ara-pomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena.
Tonga izao ny fotoana hisintonana lesona mba ahafahana manatsara ny momba ny fifidianana manaraka. Nandritry ny volana maromaro mialohan’ny 3 desambra, dia in-efatra ny SeFaFi no nanao tolo-kevitra mba hahatonga ny fifidianana tsy azo kianina sy tsy hisian’ny fanoherana.
Ny 17desambra 2006 :...
Mba hahazoana tsara kokoa ny toe-draharaha momba ny fiainam-piarahamonina
Matetika loatra no hamaivanin’ny mpanao politika sy ny tompon’ny fanapahan-kevitra eto amin’ny firenena ny antsoina hoe « fiainam-piarahamonina ». Fandre matetika fa ny hatsaran’ny toe-piainan’ny mponina dia tsy hafa fa vokatry ny politika tsara momba ny toekarena izay miseho amin’ny fitombon’ny harin-karena mitohy tsy miato. Raha izany fanjohian-kevitra izany no arahina, dia miteraka ho azy fihatsaran’ny toe-piainan’ny mponina ny fitombon’ny harin-karena, fa fiharats...
Mba hahazoana tsara kokoa momba ny toe-draharaha ara-toekarena
Voakasiky ny fivoaran’ny toe-draharaha momba ny toekarena ao amin’ny fireneny ny olom-pirenena tsirairay, na dia tsy afaka hahazo mandrakariva ny lafiny teknika rehetra amin’izany aza izy. Ny renim-pianakaviana miatrika ny fiakaran’nyvidin’ny entana eny an-tsena, ny mpiasa izay tsy miakatra ny karamany, ny ray aman-dreny manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny kojakojam-pianarana, ny marary tsy manan-kianteherana eo anoloan’ny halafon’ny fanafody, toe-draharaha mitovy amin’...
Atao izay hampangarahara ny kaontim-bola fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ho avy izao
Tamin’ny fanambarana nataony ny 17 febroary 2006 no namakafakan’ny SeFaFi ny raharaha mikasika ny famatsiam-bola ny antoko sy ny fampielezan-kevitra.
Voatsinjo ao amin’ny andininy faha 40 ao amin’ny volavolam-pehezan-dalàna naroson’ny CNOE fa : « Ny Fanjakana no mametra ny fandaniana be indrindra azo atao amin’ny fifidianana araka ny karazam-pifidianana avy ka ijerena ny fari-piainana sy fahombiazan’ ny firenena eo amin’ny lafiny toekarena hahafahana mampisy fito...
Ahoana ny fomba hitantanana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ?
Mbola tsy afaka ao an-tsain’ny SeFaFi hatramin’izao fa ny krizy tamin’ny taona 2002 dia nateraky ny fifanolanana fotsiny tamin’ny fifidianana izay niharatsy taty aoriana nohon’ ny tsy fandraisana andraikitra nisy teo amin’ny rantsana mpitantana ny fifidianana. Koa tsapan’ny SeFaFi fa ilaina hotohizana ny fandinihana samihafa mikasika ny fitantanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy izao izay nampahafantarina ny besinimaro nanomboka tamin’ny fiandohan’ity tao...